Vavaka ho an'ny Zanaka masin'i Atocha. ? Lalana misokatra, fiarovana ary fahasalamana.
Vavaka ho an'ny Zanaky Atocha. Isika izay nino sy nanatanteraka tamim-pahatokiana ny Katolika dia nanao indray mandeha indray mandeha vavaka ho an'ny Zanaka Masin'i Atocha indrindra any amin'ireo firenena toa an'i Venezoelà, Espana, Kolombia, Honduras, Filipina, Etazonia ary any Mexico, izay no misy eo am-panajana izany fa manana hery mahery kokoa izy ary misy toeram-pitsaboana sasany izay omem-boninahitra isan'andro ary mahazo mpitsidika an'arivony isan-taona.
Iray amin'ireo fisoloan-tozan'i Jesosy zaza izay lasa tena malaza izy io noho ireo fahagagana maro izay fantatra sy ambara aminy.
1 Vavaka ho an'ny zanaka Masin'i Atocha Iza izany?
2 Vavaka amin'ny Zanaky ny Atocha hanokatra lalana
3 Vavaka amin'ny Zanaky Atocha ho fiarovana
4 Vavaka mahagaga ho an'ny fahasalamana
5 Mahery ve ny Santo Niño de Atocha?
Vavaka ho an'ny zanaka Masin'i Atocha Iza izany?
Ny tanànan'i Atocha dia misy ao Espaina ary fantatra fa ny taonjato fahatelo ambin'ny folo dia notafihin'ny Silamo tanteraka.
Nogadrain'izy ireo izay rehetra nanam-pinoana kristiana tsy nisy sakafo na fisotroana ho fomba fanasaziana mafy amin'ny finoany.
Tamin'izany fotoana izany ny zaza roa ambin'ny folo taona no navela hamahanana ireo voafonja ary tao no nahatonga ny Zanaky ny zanak'i Atocha nanao ny endriny.
Ireo voafonja dia nanomboka mandray ny fitsidihan'ny ankizy iray izay nanatona azy ireo isan'andro nitondra sobiky sakafo izay nihinanan'ny tsirairay ny voky.
Ny tena nahagaga dia tsy lany ny sakafo ary ny harona kosa dia nanana zavatra ho azy ireo foana.
Nitafy fitafiana tsotra toy ny mpivahiny ny zazalahy saingy rehefa nahita ny fahagagana ny fitomboan'ny mpino mpino dia nahafantatra fa io zaza io dia i Jesoa no tonga namahana azy ireo.
Vavaka amin'ny Zanaky ny Atocha hanokatra lalana
Infante de Atocha, mamindra fo sy tsara fanahy, tonga eo aminao aho mba hilaza aminao ny halako sy ny ilaiko anao, tiako ianao hampodino ny masonao mamindra fo amiko ary hahita ny famoizam-po sy fahoriana izay manenika ahy, efa nataoko daholo izay rehetra vitako fa ny ahy Zava-dehibe ny olana ary tsy mbola nahita vahaolana aho, Ianao izay tena mahagaga tokoa, aza miala amiko: mangataka anao mafy aho handefa ahy fanampiana, mangataka fampiononana maika sy fanampiana hatrany amin'ny famakiana ny ankamaroan'ny zanaka masina sy masina an'i Atocha, mpiaro ny olona rehetra, fiarovana amin'ny tsy afa-manoatra, mpanasitrana avy amin'ny aretina rehetra.
Zanaky ny Fanahy Mahery: Miarahaba anao, midera anao aho anio ary manolotra anao ireto vavaka ireto: hatrany an-tanàna masin'i Jerosalema ka hatrany Betlehema.
Noho ny finoana izay ananako anao, henoy ny fangatahako, noho ny fahatokisana izay apetrako aminao, omeo ahy izay angatahiko tamim-panetren-tena: (anontanio izay tianao hotanterahina).
Izaho izay tia anao mihoatra noho ny zavatra rehetra, te hidera anao tsy misy fetra, eo akaikin'ireo mpihira Cherubima sy Seraphim, feno haingo tanteraka. Manantena aho, zanaka Masin'i Atocha sarobidy indrindra, valiny mahafaly amin'ny fangatahako.
Fantatro fa tsy hiady hevitra momba anao aho, ary homenao mahafaty ahy koa ianao, mba hiarahako aminao ao Betleilin'ny voninahitra.
Izy, mpampita ny zava-miafina rehetra ary fatra-pahazavana amin'ny fomba lehibe no manome antsika ny fahagagana amin'ny fampisehoana antsika ny lalana amin'ny fotoana rehetra hahafahantsika mamakivaky azy ireo amin'ny fahatokisana sy fiarovana tanteraka.
Ireo mpandalo toa tsy mety na tsy mety miampita, azo antoka izany Noho ny fanampian'ny Zanakao Atocha dia afaka mandalo ianao.
Ny vavaka dia afaka manokatra ny lalantsika amin'ny lafiny ara-bola, amin'ny fandalinana, miaraka amin'ny fianakaviana na ho an'ireo drafitra na tanjona tiana ho tratrarina.
Vavaka amin'ny Zanaky Atocha ho fiarovana
Jesosy hendry Jesosy avy amin'i Atocha, mpiaro ankapobeny ny lehilahy rehetra, fiarovana ankapobeny ny tsy manan-tanana, dokotera avy amin'ny aretina rehetra.
Ry zaza mahery indrindra, miarahaba anao aho, midera anao aho anio ary manolotra anao telo ireo Raintsika, Hiran'i Maria am-boninahitra, ho fahatsiarovana io dia nataonao io, ka tonga nofo ao anaty tanànan'ny reninao mahafinaritra indrindra ianao, avy ao an-tanànan'i Jerosalema masina ka tonga amin'ny sehatra nahaterahana.
Noho ireo fahatsiarovana nataoko tamin'ity andro ity dia mangataka aminao aho mba omeo ahy izay angatahiko ...
Izay atolotro ireo fahamendrehana azy ireo ary miaraka amin'izy ireo miaraka amin'ireo amboaram-peo kerobima sy serafima, izay voaravaka fahendrena, izay antenaiko, ry Atocha, zanaky ny Atocha, mirotsaka an-tsitrapo amin'izay angatahiko aminao ary lazaiko ary azoko antoka fa tsy hiala aho ravoravo ny momba anao, ary hahita fahafatesana tsara aho, ho avy hiaraka aminao eo amin'ny sehatra nahaterahan ny voninahitra.
(Eto dia arahana ny fangatahana ary telo ny Rainay, ny Hail Marys sy ny Voninahitra telo no ivavahana)
Mpiaro izay mino azy na dia misy aza ny toe-javatra.
Toy izany koa nanampy sy niaro olona izay nahita azy dia sambany ho antsika koa.
Mety tsy miseho amin'ny endrika zaza intsony izy na hahita azy manatona antsika ara-batana kanefa ny fahagagana dia hatao foana rehefa mangataka am-pinoana sy amim-pahatokisana fa mihaino antsika Izy ary tonga amin'ny antso miantso antsika.
Vavaka mahagaga ho an'ny fahasalamana
Ry Zanaka malala sy malalako!
Fantatro fa fony ianao teto amin'ity tontolo ity dia malahelo ny olona rehetra izay nijaly, indrindra ireo izay nijaly mafy.
Ho azy infinito fitiavana tokony homenao, nositraninao ny fahoriany sy ny alahelony, ary ny fahagagana nataonao dia fanehoana tsara ny hatsaram-panahinao, ny fitiavana sy ny famindram-po mandrakizay.
Noho izany, ry Zanaky ny fahasalamana!, Ny zanako malalako, ny fiononako be dia mangataka aminao am-panetren-tena, manolotra ahy ny hery ilaina hiaretana fanaintainana, fanamaivanana sy fiononana amin'ny fotoana sarotra indrindra ary indrindra ny fahasoavana manokana, hamerenako ny heriko, ny heriko, ny fahasalamako, raha toa ka mifanaraka amin'ny mahasoa ny fanahiko izany.
Ao no hahafahako midera anao, misaotra sy midera anao mandritra ny androm-piainako.
Ampiasao ny herin'ity vavaka mahagaga any amin'ny Santo Niño de Atocha ho an'ny fahasalamana.
Tsy misy ny fahasahiranana izay tsy mahaonan'ny Zanaky ny Zanaka Atocha azy afaka manome ny herinao mahery.
Tsarovy fa Jesosy Kristy Tompontsika izay niresaka ho antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana, dia nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo, ilay niseho tao amin'ny soratra masina.
Tsy misy aretina izay efa tsy niaretany hatramin'ny nitondrantsika ny aretintsika tao anaty crusades, izany no finoana ananantsika rehefa ataontsika io vavaka io Mangataka fahagagana masina ho an'ny fahasalamantsika.
Mahery ve ny Santo Niño de Atocha?
Ny tantaran'i Jesosy hatramin'ny nahatongavako tany an-kibon'i Maria Virjiny dia mahagaga sy mahery.
Ny mino fa efa very ity hery ity dia fihetsika tsy fahampian'ny finoana izay matetika tonga amintsika ho vokatry ny daroka izay zavamaniry fahavalo iray ao an-tsaintsika mba hahatonga antsika hisalasala.
Na dia an-taonany maro aza FAHAFATESANA sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, mino ny heriny mahagaga isika.
Ny fanasana ny Zanaka Masina Atocha dia marika fa lehibe ny heriny ary mbola tsaroany amintsika izay mino azy. Aoka isika hanohy hino sy hivavaka amin'ny finoana ary hanohy hanampy antsika sy hamaly ny fangatahana amin'ny fitiavana tsy manam-petra.
Manantena aho fa tianao ny vavaka Zanaky ny Atocha.
Vavaky ny vavaka mangataka ny famerenako taloha
Ny vavaka ho an'ny Saint Mark an'i Leon ho avy
Vavaka ho an'i Saint Helena mahagaga